2022 ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင် Bitcoin အရောင်းအ၀ယ် အမြတ်အစွန်းအတွက် Bitcoin ကုန်သွယ်မှုနည်း -2ကုန်သွယ်မှုကိုလေ့လာပါ။
Bitcoin အရောင်းအ ၀ ယ် - ၂၀၂၁ Bitcoin နှင့်အကောင်းဆုံး Crypto Trading Platforms ကိုမည်သို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ရမည်
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 15 ဇွန်လ 2022
မကြာသေးမီအချိန်တစ်ခုတွင်၊ Bitcoin - ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးနှင့်အနှစ်သာရဖြစ်နေဆဲဖြစ်သော cryptocurrency သည် developer ၏ pipedream ထက်မပိုပါ။ 2022 သို့ လျင်မြန်စွာရှေ့ဆက်ပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးသည် ယခုအခါ ပေါင်သန်းပေါင်းများစွာရှိသော ပစ္စည်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် Bitcoin ကုန်သွယ်မှုကို ဆွေးနွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
သင်တတိယပါတီ cryptocurrency ဖလှယ်မှုများတွင် Bitcoin ကိုဝယ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့်ရောင်းဝယ်ခြင်းသာမကသာမကပိုင်ဆိုင်မှုလူတန်းစားသည်ယခုအခါတွင်ပြည့်စုံကောင်းမွန်သည့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောအနာဂတ်စျေးကွက်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
သတိပြုရမည်မှာ Bitcoin ကုန်သွယ်မှုသည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်လူကြိုက်များလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်အလွန်မှန်းဆ။ မတည်ငြိမ်သောပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ တကယ်တော့၊ cryptocurrency ဟာတစ်ရက်တည်းမှာ ၁၀% ကျော်တက်ပြီးတန်ဖိုးတက်သွားတာမဆန်းဘူး။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင်ကသင်၏ cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလက်ျာခြေရင်းမှချွတ်ဘယ်လိုရနိုင်မလဲရှာဖွေရှာဖွေနေလျှင် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစိတ်အတွက်သေချာဖတ်ပါ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းညွှန် Bitcoin. ၎င်းအတွင်းတွင်၊ Bitcoin ကုန်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်ပုံ၊ မည်သည့်အန္တရာယ်များကို သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်၊ ငွေရှာနည်း၊ မည်သည့်ပလပ်ဖောင်းတွင် ကုန်သွယ်မှုပြုသင့်သည်၊ အချို့မှာ အဘယ်အရာများဖြစ်သည် Bitcoin စျေးနှုန်းဟောကိန်းများ နှင့်ပိုပြီး။
မှတ်စု: အကယ်၍ သင်သည် Bitcoin ကို ရေတိုအခြေခံဖြင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် ရှာဖွေနေပါက၊ သင်သည် ခလုတ်တစ်ခုကို နှိပ်၍ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်း၏ ရွေးချယ်ခွင့်ကို လိုချင်ပါက CFDs များကို ရောင်းဝယ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။.
Bitcoin Trading ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကဘာတွေလဲ။
နို့စို့အရွယ်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သော ဆန်းသစ်တီထွင်သောစျေးကွက်ကို ဝင်ရောက်ပါ။
ပေါင်ဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်သော Bitcoin သည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေပါသည်။
Bitcoin စျေးကွက်များသည် 24/7 ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
ရာနှင့်ချီသော Bitcoin ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများသည် ယခုအခါ စျေးကွက်ထဲတွင် ရှိနေသည်။
အချို့သောပွဲစားများကသင့်အား Bitcoin ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်ခွင့်ပြုသည်။ CFDs အခကြေးငွေ အခမဲ့ဖြင့်
ငွေကြေးနယ်ပယ်ရှိ မှန်းဆနိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားများထဲမှ တစ်ခု။
ရှေ့မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း၏ သီးခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စေ့စေ့စပ်စပ်လေ့လာကြည့်ရာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ် Bitcoin ဟူသည်ကို နားလည်ကြောင်း သေချာပါစေ။ ၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံတွင်၊ Bitcoin သည် 2008 ခုနှစ်တွင် အမည်မသိ developer မှဖန်တီးခဲ့သော cryptocurrency တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရင်းခံနည်းပညာကို 'blockchain' ဟုခေါ်ပြီး ၎င်းသည် Bitcoin စနစ်အား 'ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း' ပုံစံဖြင့်လည်ပတ်နိုင်စေပါသည်။
လူပြိန်း၏အသုံးအနှုန်းအရ၊ ဤသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတည်း သို့မဟုတ် အာဏာပိုင်တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ Bitcoin ကွန်ရက်ကို ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမဟုတ်သလို မည်သည့်အစိုးရ သို့မဟုတ် ဗဟိုဘဏ်ကမဆို ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော ငွေကြေးကို ဆိုလိုသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ငွေပေးငွေယူများကို 'မိုင်းလုပ်သား' မှ အတည်ပြုပြီး အတည်ပြုပါသည်။ မည်သူမဆို ၎င်းတို့တွင် လိုအပ်သော ဟာ့ဒ်ဝဲစက်ပစ္စည်းရှိသရွေ့ Bitcoin miner ဖြစ်လာနိုင်သည်။
ပိုလျှံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပံ့ပိုးမှုအတွက်အပြန်အလှန်အားဖြင့်, အောင်မြင်သောမိုင်းလုပ်သား Bitcoin နှင့်အတူဆုခခြံနေကြသည်။ Bitcoin အဖြစ်ငွေကြေးတစ်ခုသည် virtual ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Pound သို့မဟုတ် US ဒေါ်လာကဲ့သို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံဖြင့်မတည်ရှိသည်။ ၎င်းအစားအရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ငွေလက်ကျန်များအားလုံးကို blockchain တွင်သိမ်းဆည်းထားသည် - ၎င်းသည်အကျင့်ယိုယွင်းမှု၏ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုမပြောင်းလဲစေနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အမည်မသိ၊ မြန်ဆန်။ စျေးပေါသောငွေလွှဲလုပ်ငန်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။
Bitcoin Trading ဆိုတာဘာလဲ။
ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုသည် တန်ဖိုးရှိပါက၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်သော စျေးကွက်တည်ရှိနေဖွယ်ရှိသည်။ ဒါပဲလား။ ဆီ, ရှေ, ဂြုံသကြား၊ သို့မဟုတ် စပါး - အများဆုံး ကုန်စည် ထိုတန်ဖိုးကို ငွေရှာရန် အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှ ဝယ်ယူရောင်းချနိုင်သည်။ Bitcoin နှင့် အခြားသော cryptocurrencies များတွင် ဤအယူအဆသည် မတူညီပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ အရောင်းအဝယ်လုပ်လို့ရပါပြီ။ Bitcoin သင်သည် အခြားသော ပိုင်ဆိုင်မှု လူတန်းစားကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်းပင်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်၊ Bitcoin ကုန်သွယ်မှုသည် Forex ကုန်သွယ်မှုနှင့်အတန်ငယ်ဆင်တူသည်၊ သင် Bitcoin သည်အခြားငွေကြေးနှင့်အလဲအထပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် GBP၊ USD၊ သို့မဟုတ် EUR ကဲ့သို့သော fiat ငွေကြေးတစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကဲ့သို့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နိုင်သည်။ Ethereum နှင့် Ripple ။
မှတ်စု: Bitcoin တွင် ငွေကြေးကုဒ် 'BTC' ရှိသော်လည်း အချို့သော platform များသည် 'XBT' အစား 'XBT' ကို အသုံးပြုသည်။
သို့သော် Bitcoin တွဲဖက်မှုအရှိဆုံးနှင့်အများဆုံးအရည်သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ဒီလမ်းညွှန်စာအုပ်ရေးသားနေချိန်မှာ BTC / USD စျေးကွက်ဟာ ၂၄ နာရီအတွင်းဒေါ်လာ ၂၃ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိကုန်သွယ်မှုတွေကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အနည်းဆုံးပေါင် (သို့) ကိန်းဂဏန်းခြောက်ခုကိုသင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည်ဖြစ်စေ၊ လှည့်ပတ်စီးဆင်းရန်လုံလောက်သောလုံလောက်မှုထက်ပိုသည်။
ဒီအာကာသအတွင်းအကြီးဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်သကဲ့သို့သင်တို့အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့် Bitcoin ကိုကုန်သွယ်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်သည်။
Bitcoin ကိုလက်ရှိတွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်။ သို့သော်သင်က၎င်းသည်ရေတိုတွင်စျေးနှုန်းတက်လိုသည်ဟုသင်ထင်သော်လည်း
ထို့ကြောင့် သင်သည် 'အမှာစာ' ကို ပေါ်တွင် တင်ပါ။ BTC / အမေရိကန်ဒေါ်လာ အတွဲ $500 ပါ။
လာမည့် 48 နာရီကာလအတွင်း Bitcoin သည် $12,000 သို့တိုးလာသည် - အမြတ် 20% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
သင် $500 ကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုက်သည်နှင့် သင်၏ 20% အမြတ်များသည် သင့်အား $100 အမြတ်ငွေ ရရှိစေပါသည်။
မှတ်စု: BTC/USD ကို US ဒေါ်လာဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသော်လည်း၊ သင်၏ UK အခြေစိုက် ပွဲစားသည် အမြတ်နှင့် အရှုံးများကို Pound Sterling အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသေးသည်။.
Bitcoin ကို ၀ ယ်ရန်၊ ရောင်းရန်နှင့်ရောင်းဝယ်ရန်အတွက်သင်သည် third-party platform တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသောပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အထူးကျွမ်းကျင်သော cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်းသို့မဟုတ် CFD ပွဲစားဖြစ်နိုင်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ သင်က Bitcoin ကိုကာလတိုကုန်သွယ်ရန်စီစဉ်ခြင်းရှိ / မရှိပေါ်တွင်မူတည်သည်။တစ်ရက်ကုန်သွယ် သင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုရေရှည်အခြေခံပါ။
ထို့ကြောင့် Bitcoin Trading တွင်ပါ ၀ င်ခွင့်ပြုသည့်အဓိကနည်းလမ်းများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
100% ပိုင်ဆိုင်မှုမှတဆင့် Bitcoin ကုန်သွယ်
သင်သည် Bitcoin ကို၎င်း၏အပြင်းထန်ဆုံးပုံစံဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကသင်ပထမဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကိုဝယ်ယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဤအရာသည်မည်သို့အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသွားမည်ဖြစ်သော်လည်းသင်သည်ငွေကြေးတန်ဖိုးအပ်ငွေများကိုလက်ခံရန်လိုင်စင်ရရှိထားသော third-party cryptocurrency လဲလှယ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ထို့နောက်၎င်းသည်သင့်အားငွေထုတ်ရန် (သို့) ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ဘဏ်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည် Bitcoin ဝယ်ဖို့သင်သည်အခြားငွေကြေးများနှင့်လဲလှယ်နိုင်သည်။ သင် Bitcoin ပိုင်ဆိုင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ရေးတွင်ပါဝင်လိုပါက Ethereum ကဲ့သို့သောအခြား cryptocurrencies ကိုသင်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။
မှတ်စု: အကယ်၍ သင်သည် Bitcoin 100% ကို ပိုင်ဆိုင်လိုပြီး ၎င်းကို US ဒေါ်လာကဲ့သို့ fiat ငွေကြေးများဖြင့် ရောင်းဝယ်ပါက၊ သင်သည် BTC/USDT အတွဲမှတဆင့် ၎င်းကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ USDT သည် Tether ဟုခေါ်သော အမေရိကန် ဒေါ်လာနှင့် ပေါင်းထားသော cryptocurrency ဖြစ်သည်။.
အလားတူစွာသင်၏ Bitcoin ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်လဲလှယ်လိုပါကသင်၏ရွေးချယ်ထားသော cryptocurrency လဲလှယ်မှုတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒုတိယရွေးစရာမှာသင်၏ Bitcoin ကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောသင်၏ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်သို့ထုတ်ယူရန်ဖြစ်သည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည် Bitcoin တွင်ရေရှည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများအတွက်ဖြစ်သည်၊ အနာဂတ်တွင်၎င်းသည်သိသိသာသာပိုမိုတန်ဖိုးရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်။
Bitcoin CFDs ကုန်သွယ်
သင်တစ် ဦး သည်တစ်နေ့ကုန်သွယ်မှုအခြေခံအနေဖြင့် Bitcoin အာကာသကိုကြည့်ရှုရန်ရှာဖွေနေသည့်အတွေ့အကြုံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပါက CFD (စာချုပ်အတွက်ခြားနားချက်) ကိုစဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ CFD များကသင့်အားပိုင်ဆိုင်ရန်သိုမဟုတ်သိုလှောင်စရာမလိုဘဲအနာဂတ်၏အနာဂတ်စျေးနှုန်းကိုခန့်မှန်းရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ CFD များသည် Bitcoin နယ်ပယ်တွင်သာမကကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးနီးပါးတွင်ရှိသည်။
၎င်းသည်ရှယ်ယာများဖြစ်စေ၊ ရှယ်ယာဖြစ်စေ၊ ရွှေ၊ ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ သို့မဟုတ် S&P 500 - CFDs သည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ CFD ပွဲစားမှတစ်ဆင့် Bitcoin ရောင်းဝယ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာများပြားလှသည်။ ပထမနှင့်အဓိကအားဖြင့် third-party cryptocurrency ဖလှယ်မှုနှင့်မတူဘဲ CFD အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းသည်အလွန်တင်းကြပ်သောစစ်မြေပြင်ဖြစ်သည်။
ဥပမာ UK တွင် CFD ပွဲစားများအားလုံးသည် Financial Conduct Authority နှင့်လိုင်စင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်သင့်အား cryptocurrency လဲလှယ်ရာတွင်မရရှိနိုင်သည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအကာအကွယ်ပေးသည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် CFD platform များသည် debit / credit card, bank transfer နှင့် PayPal ကဲ့သို့ e-wallets စသည့်နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုထောက်ပံ့သည်။
ထို့ကြောင့် Bitcoin ကိုစတင် ၀ ယ်ရန်အမှန်တကယ် ၀ ယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းအစား၊ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်၊ ရန်ပုံငွေများထည့်ရန်နှင့် Bitcoin CFD ကိုချက်ချင်း ၀ ယ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်လည်းအကျိုးရှိသည်။ သင်၏ Bitcoin အမြတ်ငွေကိုဒီဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းပေးမည်ကိုသင်စိတ်ပူစရာမလိုပေ။ UK CFD ပလက်ဖောင်းများသည် GBP ရှိချိန်ခွင်များ၊ အမြတ်များနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင်ကွင်းသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်အမျှပျံ့နှံ့ဖလှယ်မှုနှင့်ပွဲစားများသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများကိုကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ ၎င်းတွင် CME နှင့် CBOE နှစ်ခုစလုံးတွင်အနာဂတ်စျေးကွက်ပါဝင်သည် - ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးသောအနကျအဓိပ်ပါယျလဲလှယ်မှုနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြောကြားခြင်းအားဖြင့် CME နှင့် CBOE တို့သည်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေစဉ်၊ Bitcoin အနာဂတ်စျေးကွက်များကိုလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်လည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒီနေရာမှာ Bitcoin အနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေးထွက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဥပမာတစ်ခုပါ။
သငျသညျ Bitcoin ၏အနာဂတ် ဦး တည်ချက်အပေါ်အီရန်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါစို့။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်က Bitcoin အနာဂတ်စာချုပ်ထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆုံးဖြတ်။ စာချုပ်တွင်သုံးလသက်တမ်းကုန်ဆုံးသောနေ့ရက်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်၌ (သို့) မတိုင်မီတွင်သင်စာချုပ်ကိုရောင်းရန်အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခံရလိမ့်မည်။ Bitcoin စာချုပ်၏စျေးနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၈၀၀၀ ဖြစ်သည်။
သင်တစ် ဦး ချင်းစီ $2မှာ 8,000 Bitcoin အနာဂတ်စာချုပ်များကိုဝယ်ကြလော့။
ဤပမာဏသည်ကုန်သွယ်မှုပမာဏဒေါ်လာ ၁၆၀၀၀ ဖြစ်သော်လည်းသင်သည်သေးငယ်သည့်ပမာဏကိုသာထားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရန် သင်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် Bitcoin ၏စျေးနှုန်း စုဝေးနေပါသည်။
သုံးလအတွင်းစာချုပ်သက်တမ်းကုန်သွားသောအခါ Bitcoin စျေးနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာစာချုပ်တစ်ခုစီသည်သင်ပေးဆောင်ရသည့်စျေးနှုန်းထက်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ပို၍ တန်ဖိုးရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
မင်းမှာအနာဂတ်ကန်ထရိုက်စာချုပ် ၂ ခုရှိတယ်၊ ဆိုလိုတာကခင်ဗျားရဲ့အသားတင်အမြတ်ကဒေါ်လာ ၄၀၀၀ ဖြစ်တယ်။
အလားတူစွာထားနှင့်ခေါ်ဆိုမှုရွေးချယ်မှုများသည်လည်း Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင်ကွင်းသို့ရောက်ရှိနေပြီ ၎င်းသည်နောင်တွင် Bitcoin ကို ၀ ယ်ယူရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်မဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်“ ပရီမီယံ” ကိုပေးဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဤနေရာတွင် Bitcoin ရွေးချယ်စရာများကုန်သွယ်မှုမည်သို့ထွက်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်းဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Bitcoin Options ကုန်သွယ်မှု၏ဥပမာ
အနာဂတ်ကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း Bitcoin ရွေးချယ်စရာများကိုကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအတော်များများတွင်ရရှိနိုင်သည်။ အဓိကအယူအဆကတော့သင်ရွေးချယ်သောစျေးကွက်ကို ၀ င်ရန် Bitcoin ကိုအပိုဆုကြေးပေးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Bitcoin သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ တန်ပြီးသပိတ်မှောက်မှုဒေါ်လာ ၁၁၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုအတွက်ပရီမီယံဒေါ်လာသည် ၁၀ ဆင့်ဖြစ်သည်။
Bitcoin ခေါ်ဆိုမှုရွေးချယ်မှုတစ်ခုဝယ် $300 ကိုစွန့်စားလိုပါသည်။
ဤအရာသည်သင့်အား Bitcoin ၏ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ တန်တန်ဖိုးကိုရရှိစေသည်။ တစ်ခုသာဖြစ်နိုင်တယ်။
Bitcoin သည်ကန်ထရိုက်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီဒေါ်လာ ၁၁၀၀၀ ၏သပိတ်မှောက်စျေးနှုန်းကိုမအောင်မြင်ပါကသင်၏ဒေါ်လာ ၃၀၀ ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
ဒုတိယဇာတ်လမ်းကတော့သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း Bitcoin သည်ဒေါ်လာ ၁၁၀၀၀ ၏သပိတ်မှောက်မှုထက်သာလွန်သည်။
နှစ်ပတ်အကြာတွင် Bitcoin သည်ဒေါ်လာ ၁၂၀၀၀ ဖြင့်ထိုင်နေသည်ဟုဆိုကြပါစို့။
သင်ယခင်ကပေးခဲ့သည့်ပရီမီယံသည်သင်အား Bitcoin ကို ၀ ယ်ယူပိုင်ခွင့်ပေးသည်။ သို့သော်လက်ရှိစျေးကွက်တန်ဖိုးမှာဒေါ်လာ ၁၂၀၀၀ နှင့်ညီမျှသည်။
သင်အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်လုပ်လိုသောပိုင်ဆိုင်မှုလူတန်းစားမျိုးကဲ့သို့ပင်အခကြေးငွေနှင့် ပတ်သက်၍ သင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများအများအပြားလာနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အောက်ပါအချက်များမှတဆင့်ဖတ်ရှုဖို့သေချာပါစေ။
Bitcoin အွန်လိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်သည့်အခါသင်တွေ့ရသောအသုံးအများဆုံးအခကြေးငွေမှာရာခိုင်နှုန်းအခကြေးငွေဖြစ်သည်။ သင်၏အမှာစာပမာဏကိုတွက်ချက်ပါကသင်နှစ်ကြိမ်ပေးရပါမည်။ သင်ကုန်သွယ်မှုစတင်ဖွင့်သောအခါနှင့်၎င်းကိုသင်ပိတ်သည့်အခါသင်ကပေးချေလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုသော်ကုန်သွယ်ခသည် ၁% ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါစို့။ သင် Bitcoin ပေါင် ၂၅၀ တန်ဖိုးရှိ ၀ ယ်လိုပါကအစပိုင်းတွင်£ 1 ပေးရပါမည်။ အကယ်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးသည်ပေါင် ၄၀၀ အထိကြီးထွားလာပြီးသင်၏အမြတ်အစွန်းကိုသိရှိရန်ကုန်သွယ်ရေးကိုပိတ်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်လျှင်၊ သင်သည်£ 250 ကိုအခကြေးငွေပေးရမည်။
အချို့သော Bitcoin ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်သင်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်တိုင်းသင်အားအခကြေးငွေပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပွဲစားသည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုလျှင်ပေါင် ၄.၅၀ ကောက်ခံသည်ဟုဆိုပါစို့။ သင်၏အမှာစာအရွယ်အစားမည်သို့ပင်ရှိပါစေသင် Bitcoin ၀ ယ်သည့်အချိန်တွင်ပေါင် ၄.၅၀ နှင့်သင်ရောင်းသည့်အခါပေါင် ၄.၅၀ ထပ်မံပေးဆောင်ရပါမည်။ စျေးနှုန်းချိုသာသောစနစ်သည်အမှန်တကယ်ပမာဏကြီးမားသောကုန်သွယ်သူများအတွက်ပိုမိုအကျိုးရှိသည်။
ကော်မရှင် - အခမဲ့ပလက်ဖောင်းများ
အချို့သော အွန်လိုင်းကုန်သွယ် ယခုပလက်ဖောင်းများသည် Bitcoin ကိုကော်မရှင်မှအခမဲ့ ၀ ယ်ယူခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှု၏အဆုံးသတ်တွင်ကုန်သွယ်ခကိုမပေးနိုင်ဟုဆိုလိုသည်။ သို့သော်လူသစ်ကုန်သည်များသည်ပြန့်ပွားမှုအကြောင်းမေ့တတ်ကြသည်၊
သင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေပါစေဖြန့်ကျက်မှုအမြဲရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏“ ၀ ယ်ခြင်း” စျေးနှုန်းနှင့်“ ရောင်း” ခြင်းအကြားခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ သင်ပြန့်ပွားမှုကိုရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်ဖြင့်တွက်ချက်နိုင်သည်၊ ထို့နောက်သင့်အားမည်မျှပေးဆောင်ရသည်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ Bitcoin ၏ဝယ်ရောင်းဈေးကွာခြားချက်မှာ 1.5% ဖြစ်သည်ဆိုကြပါစို့။ အကယ်၍ သင်သည် Bitcoin ကိုအကြာကြီးဆက်သွားပါက၊ အရင်းကျေရန်အတွက် အနည်းဆုံး 1.5% ဖြင့် စျေးနှုန်းတိုးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
Bitcoin ကို leverage ဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်သင်စီစဉ်ပါကပလက်ဖောင်းသည်မည်သည့်ငွေကြေးအတွက်မည်သည့်အဖိုးအခကောက်ခံသည်ကိုသင်အကဲဖြတ်ရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ချေးငွေနှင့်ဆင်တူသည်၊ အနည်းဆုံးသင်သည်ပွဲစားထံမှငှားရမ်းထားသောငွေများကိုချေးယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်ကုန်သွယ်နေသောပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ငွေကြေးအခကြေးငွေများသည်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ သို့သော် Bitcoin အမှု၌၎င်းသည်စျေးကြီးနိုင်သည်။
ထို့အပြင်ငွေကြေးဆိုင်ရာအခကြေးငွေများသည်သင်ချေးယူသည့်ပမာဏ၏ရာခိုင်နှုန်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပွဲစားသည်တစ်နှစ်တာတွင် ၆% ကောက်ခံနိုင်ပြီး၊ သင်ကသြဇာသက်ရောက်သောကုန်သွယ်မှုကိုဆက်လက်ဖွင့်ထားသည့်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်အချိုးကျနှုန်းထားကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။
ငါ Leverage အပေါ် Bitcoin ကုန်သွယ်နိုင်သလား?
Bitcoin ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအတော်များများသည်သင့်အားသြဇာသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ သင်ရရှိနိုင်သောသြဇာပမာဏသည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပထမအချက်အနေဖြင့်သင် Bitcoin ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်အတွက် CFD ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ပါကပွဲစားသည်ဥရောပ Securities and Markets Authority (ESMA) မှချမှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
Bitcoin နှင့်အခြား cryptocurrencies အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သောအခါလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ၂း၁ ကိုသာလျှင်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ သို့သော်၊ သင်၌အန္တရာယ်များကိုကောင်းစွာနားလည်ပြီးပိုမိုမြင့်မားသောသြဇာအဆင့်ကိုကျင့်သုံးလိုလျှင် crypto-derivative platform ကိုသုံးနိုင်သည်။
မှတ်စု: Leverage ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အမျှ သင့်ကုန်သွယ်မှုသည် သင့်နှင့်ဆန့်ကျင်ပါက သင်ငွေများစွာဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ အမှန်တကယ်တော့ သင့်ကုန်သွယ်မှုကို ဖျက်သိမ်းလိုက်လျှင် သင့်ရှယ်ယာတစ်ခုလုံးကို ဆုံးရှုံးရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် အလွန်သတိထား၍ နင်းပါ။.
ထိုကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများသည် cryptocurrency သိုက်များနှင့်ထုတ်ယူမှုများအတွက်သာသီးသန့်လုပ်ကိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည် Fiat-based ပွဲစားများကဲ့သို့စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့် Bitcoin ကို ၁၀၀း၁ အထိအထိမြှင့်တင်နိုင်သည်။
Crypto Trading Platform ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
သင်ဤလမ်းညွှန်အထိကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ပြီးပြီဆိုပါက Bitcoin ကုန်သွယ်မှုသည်သင်ယခုအပြည့်အဝနားလည်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ သင်၏ Bitcoin အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းကိုစတင်လိုသောအဆင့်သို့ရောက်နေပြီဆိုလျှင်သင်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
🥇စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် CFD ပွဲစားသို့မဟုတ် Cryptocurrency ချိန်း?
ပထမဆုံးအနေနှင့်၊ သင်သည် Bitcoin CFDs များ၏ အဆင်ပြေမှုမှ အကျိုးအမြတ်ရယူလိုခြင်းရှိ၊ သို့မဟုတ် သင်သည် Bitcoin ကို အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်လိုပြီး ၎င်းကို အခြားငွေကြေးများနှင့် ရောင်းဝယ်လိုပါက ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ CFDs ကိုရွေးချယ်ပါက၊ သင်သည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်အာဏာပိုင်မှ လိုင်စင်ရရှိထားသော ထိန်းညှိထားသော CFD ပွဲစားကို အသုံးပြုလိမ့်မည် (FCA)
ဆန့်ကျင်တွင်အလွန်နည်းပါးသော cryptocurrency ဖလှယ်မှုအထူးသဖြင့်ဗြိတိန်တွင်စည်းမျဉ်းလိုင်စင်ကိုင်ထားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Bitcoin သည်၎င်း၏အပြင်းထန်ဆုံးပုံစံဖြင့်ကုန်သွယ်လိုပါကသင်ယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ရန်ပုံငွေကိုလည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ထဲသို့ရန်ပုံငွေများကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရန်ရည်ရွယ်ထားပါသနည်း။ အကယ်၍ သင်သည်နေ့စဉ်အကြွေး / ဒက်ဘစ်ကဒ်၊ ဘဏ်ငွေလွှဲ၊ သို့မဟုတ် -e-wallet ကိုအသုံးပြုလိုပါကသင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ CFD ပွဲစားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်ပွဲစားများ Fiat ငွေကြေးကိုထောကျပံ့ဖို့တရားဝင်လွှဲပြောင်းရှိသည်။
တနည်းအားဖြင့်၊ crypto ဖလှယ်မှုအချို့သည်သင်၏ဘဏ်စာရင်းထဲသို့ငွေထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အနည်းဆုံးပေးရမှာဖြစ်ပေမယ့်ရန်ပုံငွေရှင်းဖို့ရက်အနည်းငယ်လောက်စောင့်ရမယ်။
ကော်မရှင်ကင်းလွတ်သည့်ပွဲစားကိုရွေးလျှင်ပင် - အွန်လိုင်း Bitcoin ကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း၌သင်ကုန်သွယ်ရေးအခကြေးငွေများကိုအမြဲပေးဆောင်လိမ့်မည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည့်စျေးနှုန်းပုံစံတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းသည့်စင်မြင့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်သည်ပမာဏကြီးမားစွာရောင်းဝယ်နေသည်ကိုသင်တွေ့ရှိပါကအခကြေးငွေပေးဆောင်ရမည့်ကော်မရှင်များကိုကောက်ခံသည့်ပွဲစားတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည်အသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသောကုန်သည်အသစ်တစ် ဦး ဖြစ်ပါကပြောင်းလဲမှုရာခိုင်နှုန်းအခကြေးငွေအတွက်သင့်တော်ပါလိမ့်မည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန့်ပွားမှုအကြောင်းမမေ့ပါနှင့်!
coin Bitcoin စုံအရေအတွက်
Bitcoin ကိုအခြားငွေကြေးဖြင့်သင်ရောင်းဝယ်ပါကထိုပွဲစားသည်ကမ်းလှမ်းသောပွဲစားမည်မျှကမ်းလှမ်းသည်ကိုသင်လေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာ Bitcoin ကို USD နှင့် GBP ကဲ့သို့သောအခြားငွေကြေးများနှင့်လဲလှယ်ရန်သင်ရှာဖွေနေပါသလား။
တနည်းအားဖြင့်သင် Ethereum ကဲ့သို့သောအခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများနှင့် Bitcoin ကိုကုန်သွယ်ရန်စီစဉ်ထားပါသလား။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ, လက်မှတ်ထိုးမတိုင်မီကုန်သွယ်နယ်ပယ်စူးစမ်း။
အောင်မြင်သောကုန်သည်များသည်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိရိယာများကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ပထမတစ်ချက်မှာသူတို့သည်ရှုပ်ထွေးပုံရသည်ဟုထင်ရသော်လည်း Exponential Averages နှင့် Fibonacci Retracement tools များသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်နားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။
Bitcoin ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းသည် နောက်ဆုံးပေါ် သုတေသနကိရိယာများကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဆိုလျှင်လည်း အဆင်ပြေပါသည်။ အနည်းဆုံး၊ ၎င်းတွင် Bitcoin စျေးနှုန်းအပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သော သက်ဆိုင်ရာသတင်းဖြစ်ရပ်များ ပါဝင်သင့်သည်။ အဲဒါကြောင့် မျိုးစုံကို ကြည့်ပါ။ Bitcoin စျေးနှုန်းဟောကိန်းများ အရေးကြီးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ Securities and Exchange Commission (SEC) သည်ထင်ရှားသော Bitcoin ကိုငြင်းပယ်သောအခါ ETF ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က application ကို, စျေးကွက်ချက်ချင်းအဓိကအရောင်းရဆုံးဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့်တုန့်ပြန်။ ထို့ကြောင့်အရေးကြီးသောအဖြစ်အပျက်များအားအချိန်နှင့်တပြေးညီရယူနိုင်မည့်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကိုသင်လိုချင်လိမ့်မည်။
၂၀၂၀ ၏အကောင်းဆုံး Bitcoin ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များနှင့်ပလက်ဖောင်းများ
ဘယ်ဟာဆိုတာလည်း သိပ်မသေချာဘူး။ ကုန်သွယ် Bitcoin ပလက်ဖောင်းနဲ့ သွားမလား? အကောင့်ဖွင့်ခြင်းမပြုမီ ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုံ့လဝီရိယကို လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိုသော်လည်း၊ အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် 2022 ခုနှစ်၏ ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုသုံးမျိုးကို စာရင်းပြုစုထားပါသည်။
AVATrade ရှိအဖွဲ့သည် ယခု $20 အထိ ကြီးမားသော 10,000% forex ဘောနပ်စ်ကို ပေးဆောင်နေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် အမြင့်ဆုံးဆုကြေးခွဲဝေမှုကို ရယူရန် $50,000 ပေးသွင်းရပါမည်။ မှတ်သားထားပါ၊ ဘောနပ်စ်ရရှိရန် အနည်းဆုံး $100 ပေးသွင်းရပါမည်။ နှင့် ရန်ပုံငွေများကို စာရင်းမသွင်းမီ သင့်အကောင့်ကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘောနပ်စ်ကို ထုတ်ယူခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များအရ၊ သင်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်သည့် 1 အကြိမ်တိုင်းအတွက် $0.1 ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Bitcoin သည် Fiat ငွေကြေး (USD နှင့် GBP ကဲ့သို့) နှင့်အခြား cryptocurrencies (Ethereum နှင့် Ripple ကဲ့သို့) နှစ်မျိုးလုံးကိုရောင်းဝယ်နိုင်သည်။
Bitcoin margin ကုန်သွယ်မှုလား
ပေါင်ဘီလီယံပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားအနေဖြင့် သင်သည် Bitcoin margin ကုန်သွယ်မှုတွင် ပါ၀င်နိုင်သည်ကို သင်ယူရခြင်းမှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် FCA မှ လိုင်စင်ရရှိထားသော ထိန်းညှိထားသော CFD ပွဲစားကို အသုံးပြုနေပါက သင်သည် 2:1 သာ လွှမ်းမိုးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ crypto-derivative ပလပ်ဖောင်းကိုအသုံးပြုပါက၊ သင်သည် 100:1 အထိ လွှမ်းမိုးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Bitcoin အရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုက်တွင်အနည်းဆုံးအပ်ငွေဘယ်လောက်လိုအပ်သနည်း။
အနည်းဆုံးအပ်ငွေများကိုသက်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးဌာနမှသတ်မှတ်သည်။ Bitcoin တွင်ငွေထည့်လျှင်အနည်းဆုံးအပ်ငွေအနည်းဆုံးပမာဏမရှိပါ။ တစ်ဖက်တွင် CFD ပွဲစားများသည်အနည်းဆုံးပေါင် ၁၀၀ အနည်းဆုံးအပ်နှံရန်လိုအပ်သည်။
အဘယ်သူသည်ဗြိတိန်ရှိ Bitcoin ကုန်သွယ်မှုဆိုဒ်များကိုထိန်းညှိ?
ဘဏ္Conာရေးဆောင်ရွက်မှုအာဏာပိုင်သည်ယူကေရှိ CFD ပွဲစားများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ သို့သော် cryptocurrency ဖလှယ်မှုကိုဗြိတိန်တွင်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုစိတ်ထဲမှတ်ထားပါ။
ငါ Bitcoin 24/7 ကုန်သွယ်နိုင်သလား?
NYSE နှင့် LSE ကဲ့သို့သောရိုးရာစတော့အိတ်ချိန်းများနှင့်မတူဘဲ Bitcoin ကို ၂၄/၇ အခြေခံ၍ ကုန်သွယ်နိုင်သည်။ သို့သော်စနေ၊ တနင်္ဂနွေများအတွင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာများစွာနိမ့်ကျသဖြင့်မတည်ငြိမ်မှုပိုမိုများပြားနိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Bitcoin CFD ဆိုတာဘာလဲ။
သင်သည် Bitcoin အရောင်းအ ၀ ယ်မြင်ကွင်းကိုကာလတို၊ မှန်းဆအခြေခံဖြင့်ကြည့်ရှုလိုပါက CFD များသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခကြေးငွေအလွန်နိမ့်ကျရုံသာမကခလုတ်နှိပ်ရုံဖြင့်သင်ကုန်သွယ်မှုမှထွက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် CFD ပွဲစားများကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။
ငါ Bitcoin တိုတောင်းနိုင်သလား ??
Bitcoin ကိုတိုရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ CFD တစ်ခုရောင်းရန်ဖြစ်သည်။ သင်ကုန်သွယ်မှုမှထွက်ချင်သောအခါ CFD ကိုပြန်ဝယ်လိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြောင်းပြန်အတွက်ရှည်သော်လည်း, သို့သော်, သွားအဖြစ်အကြီးအကျယ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။